Store huges heesaha iyo playlists maktabadda Lugood oo aad rabto in lagu wareejiyo si aad iPhone? Ma ahan heshiis weyn. Waxaad samayn kartaa. Maqaalkani waxa uu idin tusiyo laba jid oo sahlan in playlists ka Lugood wareejiyo iPhone. Mid ka mid ah waa in ay isticmaalaan Lugood, ka kalena waa inuu u jeesto qalab dhinac saddexaad ah caawimaad.
Qaybta 1. Isticmaalka Lugood si ay u gudbiyaan Playlists si iPhone
Qaybta 2. Isticmaal TunesGo si ay u gudbiyaan Playlists ka Lugood si iPhone
xal 1-- u Lugood 11
Sida uu ogyahay in ay dhan, Lugood in aad iPhone wareejin karaan playlists via u hagaagsan. Howlgalka waa mid fudud. Waxaad raaci kartaa tutorial fududaynay hoos ku qoran.
Tallaabada 1. Open Lugood iyo isticmaali cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone in kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Marka aad iPhone waxaa ku qoran dhinaca bidix ee suuqa kala Lugood ah, guji si aad iPhone si ay u muujiyaan suuqa kala maamulka on xaq.
Tallaabada 3. Riix Music tab iyo sax nidaameed Music . Wada hadal A markaas arbushin doonaa kuu sheegaya haddii aad u jeclaan doonaa si loo soo saaro audio iyo video files hadda aad iPhone iyo mid ka Lugood u hagaagsan. Riix saar oo nidaameed .
Tallaabada 4. Markaas, sax ah playlists in aad rabto in aad u hagaagsan. Ku bilow u hagaagsan u adigoo gujinaya Codso ee geeska midig hoose.
xal 2-- u Lugood 12
Riix ah " Music "on Murayaad ka tagay.
Sax " nidaameed Music "jeeg-sanduuq.
Hubi playlists aad rabtid in aad u hagaagsan.
Dooro " nidaameed "oo aad u hagaagsan waa playlist.
xal 3-- u Lugood 12
dooro " nidaameed Music "hubiyo-sanduuqa hoos qalab icon>" Music ".
Guji ka icon note music ku yaal qaybta sare ee bidix ee shaashadda.
Hubi playlist (s) aad dooneyso in aad u hagaagsan, markaas kuwaa oo si aad qalab ku qoran "Qalabka" qaybta ku saabsan Murayaad bidix. Waxay markaas u hagaagsan doonaa qalab aad.
Bedelka oo dhan ama soo xulay playlists ka Lugood si iPhone
Ka dhig audio ee hadda jira iyo video halka kala iibsiga playlist ah. No xogta soo gaartay.
Ma aha oo kaliya ku wareejin playlists, laakiin nuqul ka info music, sida ratings, sababi, ciyaaro dacwadood oo dheeraad ah.
U dayactir info music marka info songs la la'yahay.
Taageerada iPhone 6s (Plus), 6 (Plus), 5C, 5S, 5, 4s, 4, 3GS oo ay maamulaan ee macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6, iyo macruufka 5;
Tallaabada 1 Connect iPhone in ay kombiyuutarka
Marka hore, soo dajiyo iyo ordi TunesGo on your computer. Isticmaal cable USB Timid iPhone ah in ay ku xidhmaan iPhone ay u computer aad. Marka uu ku xiran, TunesGo goobtii lagu ogaan doonaa iPhone. Ka dibna waxaad awoodi doontaa inaad aragto waxyaabaha ku saabsan iPhone bandhigay bidix buugga kooxda geedka uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aan la isticmaalayo TunesGo, fadlan hubi aad ku rakiban Lugood on your computer. TunesGo si sax ah oo kaliya shaqeeyaan haddii Lugood ayaa lagu rakibay.
Tallaabada 2 Copy playlist ka Lugood si iPhone
Riix playlist on geed bidix buugga dhinaceeda. Riix saddexagalka rogay yar hoos Add - badhanka ugu horeysay ee line ugu sareeya w hen suuqa kala maamulka playlist u muuqataa on xaq.
Marka liiska hoos-hoos kor u furmay, dooro dar Lugood playlist . Tani waxay keeni doonaa daaqad yar. By default, oo dhan playlists Lugood ayaa la hubinayaa. Waxaad meesha ka saari kartaa shillinta, haddii aad rabto in ay doortaan playlists ee gacanta. Markaas, riix OK . Tani waxay bilaabi doonaan inay Lugood iPhone si ay u bilaabaan kala iibsiga ee playlist Lugood in aad iPhone. Inta lagu jiro kala iibsiga, hubi in aad haysato iPhone ku xiran aad PC.
Bedelka iPhone Photo Library in Computer
A Guide Full si ay u gudbiyaan iPhone in Android
Ka iPhone Bedelka Wax walba si iPad
Bedelka Photos ka iPhone in PC
Ka Mac Bedelka Music inay iPhone
Ka iPad Bedelka Music inay iPhone
Bedelka Photos ka Computer si ay iPhone
Dhoofinta iPhone Roll Camera in Computer
Bedelka Messages ka iPhone in Computer
Faylal ay ka PC wareejiyo iPhone
> Resource > iPhone > 2 Siyaabaha Bedelka playlist ka Lugood si iPhone